Free fanompoana an-tserasera. Kajy ny fefy
Kajy ny fanorenana fitaovana ho an'ny fefy
Mamaritra ireo lafiny amin'ny metatra
Ny sakan'ny ny faritra X
Ny halavan'ny lafiny ankavia Y2
Ny halavan'ny ankavanana Y
Ny elanelana eo amin'ny Lahatsoratra S3
Ny sakan'ny vavahady sy ny vavahady S1
Price 1 Lahatsoratra
manatsara ny elanelana eo amin'ny Lahatsoratra
Mifidy ny fitaovana ho amin'ny fefy
Dimensions ao santimetatra
Ny lafiny ao metatra. Ao amin'ny horonam-boky
Price fa 1 horonam-boky ny harato
Ny haavon'ny ao amin'ny birao
Ny sakan'ny ao amin'ny birao
Price ny 1 metatra toratelo
Sakan'ny ankapobeny ny taratasy
Ny sakan'ny ny taratasy ilaina
Price ny 1 taratasy
Kajy ny fefy
Ny fandaharana ny kajy ny isan'ny andry ilaina ny fametrahana ny fefy.
Ny kajy fotsiny ny elanelana misy eo amin'ny lahatsoratra sy ny kajy ny habetsahan'ny zavatra ny fefy: tariby harato, birao na ny taratasy ara-nofo.
Mba hahitana ny vola lany amin'ny fanorenana fitaovana ampiasaina, mamaritra azy ireo amin'ny antsinjarany vidiny ao amin'ny faritra misy anao.
Raha anglisy "manatsara ny elanelana eo amin'ny Lahatsoratra", dia mitovy ny anjaran'ny tsirairay ny fandaharana hizara ny fefy lahatsoratra teo ankaviany sy ankavanany ny toerana sy manova ny elanelana eo amin'izy ireo.
Mariho fa ny andry fa lehibe ny vavahady dia efa tafiditra ao amin'ny kajy.